Jụọ Ọkachamara Semalt: Ihe nchịkọta nchịkọta nchịkọta Google nyocha maka azụmahịa
Google bụ otu n'ime ihe nyocha nyocha s. O kwuru n'oge na-adịbeghị anya na ndị ọrụ nchịkọta niile ga-enwe ike ịnweta akụkọ nchịkwa nke ụlọ ọrụ site na nhazi ha na ọnwa ndị na-abịanụ. Akụkọ ndị a ka webmasters nwere nghọta nke weebụsaịtị ha. Ọzọkwa, ha na-enweta echiche nke ihe na-emekarị ụbọchị ndị a na otu esi enweta okporo ụzọ dị ike na saịtị ha site na ime nke ọma na Google.
Andrew Dyhan, Onye Na - ahụ Maka Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Semalt , na - ele anya na ụfọdụ ndụmọdụ bara uru ma dị mma na nke a.
Ọ bụ eziokwu na ọ bụghị ndị nwe ụlọ ọrụ ahụ ka akụkọ nchịkọta akụkọ ahụ dị. Otú ọ dị, ndị a bụ ụzọ dị mma isi nye ozi banyere ọnụahịa bounce, sessions, na àgwà nke isiokwu gị - коммутатор 10 портов. I nwekwara ike ịma ụdị njikọ nke njikọta dị iche iche dị na otu esi edozi ha. Ọzọkwa, ndị ọrụ ahụ nwere echiche nke ngwaọrụ ndị ọbịa ha ji elele weebụsaịtị ha. Google egosikwala map na ebe okpomọkụ site na akụkọ nchịkọta akụkọ iji nye ndị ọrụ ya ọtụtụ ohere iji meziwanye.
Ọ dị mkpa ka ị nweta benchmarking n'ihi na ọ bụ naanị otu ụzọ ị ga-esi nweta data n'okpuru Ngalaba na-ege ntị na nchịkọta Analytics gị..Fọrọ nke nta ka nnukwu ụlọ ọrụ weebụ na-eji akụkọ nchịkọta akụkọ, gụnyere Twiddy, nke bụ ụlọ ọrụ njem. Ọ na-emepụta ohere maka ibu na ụlọ ọrụ site na akụkọ nchịkọta akụkọ. Dị ka Twiddy CEO Ross Twiddy si kwuo, ha nwetara nchịkọta na nchịkọta na akụkọ nchịkwa iji nweta echiche nke ihe ha kwesịrị ịlele na ọtụtụ mmadụ nwere mmasị na ngwaahịa na ọrụ ha.
Jiri Benchmarking nchịkọta akụkọ maka azụmahịa gị
Ma ị na-agba nnukwu azụmahịa ma ọ bụ nzukọ dị nta, ị ghaghị iji benchmarking nyocha maka ụlọ ọrụ gị. Ọ na-enyere ndị ọchụnta ego aka na-elekwasị anya na ihe na-aga n'ihu, ihe nwere ike ịrụ ọrụ kacha mma maka ha na otu esi eme ka azụmahịa ha dịkwuo mma ma nweta nsonaazụ achọrọ. Ọ na-emekwa ka anyị jide n'aka na anyị nwere data ziri ezi. Ọzọkwa, anyị nwere ike nyochaa ma nyochaa ọnụahịa bounce nke saịtị anyị. Ruo ugbu a, Google Analytics enyere anyị ọtụtụ nghọta banyere otú saịtị anyị na-arụ. Otú ọ dị, nchịkọta nchịkọta nchịkọta bụ ụzọ iji chọpụta otu anyị nwere ike isi melite saịtị anyị na otu esi edozi ihe mgbaru ọsọ.
Buru ụzọ nweta ihu ọma
Olee otu i si eji saịtị gị tụnyere ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ? Nke ahụ bụ ihe ị kwesịrị ịṅa ntị. Jiri akụkọ benchmark, ị nwere ike ịchọta ngwa ngwa ụdị mgbalị gị na saịtị ga-achọ ka mma. Ya mere, ị ga-azọpụta ọtụtụ oge ma nwee ike ilekwasị anya n'ihe ndị ziri ezi. Mgbe ị nwere ike ịnweta akụkọ ndị ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta ọrụ nke saịtị gị n'ụzọ dị mfe ma nwee ike ịmepụta ohere mmelite dị elu.
Dee ihe mgbaru ọsọ ndị ziri ezi
Ọ dị mma ịsị na akụkọ nchịkọta akụkọ nwere ike inyere gị aka ịhazi ihe mgbaru ọsọ ndị a. Nke ahụ nwere ike ịnye gị ozi gbasara otu esi eji onwe gị tụnyere ndị ọgbọ gị na otu esi emeri ha na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ iwu na gị na saịtị ahụ ibiaghachi ọnụego adịghị gafere pasent 50. Ọ bụrụ na ọ na - eme, mgbe ahụ, ọ nwere ohere ị ga - efu ọtụtụ n'ime ndị ọbịa gị na ogo gị na Google nwere ike ịmetụta.